‘अहिले सत्ता दलालको, सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको छ’
केशव नेपाल सत्तासिन दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीको नेताका साथै पार्टीको पेशागत विशेष जिल्लाका इन्चार्ज समेत रहेका छन नेपाल । नेता नेपाललाइ नेकपाभित्र इमान्दार र निष्ठावान नेताको रुपमा समेत चिनिन्छ । तिनै इमान्दार र निष्ठावान नेतासँग संसारन्युजले सरकार र समाजवादका विषयमा कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ इमान्दार र निष्ठावान नेतासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अँश
सत्तासीन दलको नेता हुनुहुन्छ, अहिले आफ्नै पार्टीको सरकारलाइ कसरी मुल्याङँकन गरिरहनु भएको छ ?
अहिले हाम्रो पार्टी स्पष्ट बहुमत सहित सरकारमा छ । यो सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् । सरकार पनि सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको सङकल्प सहित अगाँडि बढिरहेको छ । जनताका अपार अपेक्षा, सत्ताको पुरातनवादी कामगराइ र सीमित साधनको विचवाट सरकारले काम गरिरहेको छ । हामीले वुझ्नुपर्ने के हो भने, अहिले हामीले प्राक्टीक्स गरेको संसदीय व्यवस्था नै हो । यही व्यवस्थाभित्र नेकपाले सरकार बनाएको हो । अहिलको सरकार कम्युनिष्ट पार्टीले युद्ध जितेर बनेको सरकार होइन । यो सरकार संसदीय व्यवस्थाको लीमिटेसन भित्रको सरकार हो । यसका गतिविधीहरुलाई पनि हामीले सोही अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको मतलव सरकारका कामवाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
बाहिर सरकारका कामहरुको केही आलोचना भइरहेको सन्र्दभमा तपाइको प्रस्न आएको भन्ने मैले ठानेको छु । मैले पहिल्यै पनि भने यो सरकारका आफ्नै लिमिटेसनहरु छन । यसकारण सरकारले मैले सोँचे जति कामगर्न सकेको छैन । यसका वावजुद पनि सरकारले लिएको गतिबाट निरास हुनुपर्ने मैले देखेको छैन् ।
त्यसो भए देश समाजवादतर्फ अग्रसर भएको छ ?
समाजवाद धेरै किसीमका हुन्छन् । माक्र्सवादी समाजवाद यसलाइ हामी वैज्ञानिक समाजवाद भन्दछौ, यसवाहेक प्रजातान्त्रिक समाजवाद, सामन्ति समाजवाद लगायतका समाजवाद दुनियामा प्राक्टीस भइरहेका छन् । हामीले अहीले अपनाइरहेको संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । यस संविधानमा राखिएको समाजवादको ठ्याक्कै यस्तै व्याख्या हुनुपर्छ पनि भनिएको छैन् । यसकारण समाजवादतर्फ अग्रसर भए नभएको पत्ता लगाउने आधार के लाइ मान्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
तपाईँले भनेका तमाम समाजवादका कुनै न कुनै समानता त होलान नी !
पक्कै छन । हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादले आधारभुत जनताको मुक्तिसँग सरोकार राख्छ । यसले उत्पादनका साधनहरुमा आममानीसको स्वामित्वको कुरा गर्दछ । उत्पादनका साधनहरुमा भुँइ मान्छेको अधिकारनै वैज्ञानिक समाजवाद हो । अरु समाजवादहरुले पनि आआफ्ना वर्गको समानताका कुरा गर्छन् । सामन्तहरुले सामन्ती समाजवादका कुरा गर्लान्, पुँजिवादीहरुले पनि आफ्नै वर्ग सापेक्ष कुरा गर्छन् । तर सवैको समान विकास र समृद्धिका लागि भने वैज्ञानिक समाजवादनै हो ।
हाल सरकारले अवलम्वन गरेको चाँही कुन समाजवाद हो ?
यो सरकार पाँच वर्षका लागी जनतावाट अनुमोदित सरकार हो । यसले अहिल्यै समाजवाद निर्माण गर्नै सक्दैन । अहिले हामीले गर्ने भनेको समाजवादका आधारहरु निर्माण गर्ने हो । राष्ट्रि«य पुँजीको निमार्णमा जोड दिदै अर्थतन्त्रमा आमजनताको स्वामित्व स्थापीतगर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको आधार यो सरकारले बनाउन सक्छ ।
यसका लागी आमजनताको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी पव्लिक कम्पनीहरु निर्माण गर्ने, सिमान्तकृत नागरीकहरुलाइ राहात हुने खालका बजेटहरु ल्याउने काम सरकारले गर्नु पर्दछ । यसको अर्थ निजी स्वामित्व हुनुहुँदैन भनेको होइन । सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाइ मिलाएर लैजादा नै हामीले चाहेको समाजवादका आधारहरु निर्माण हुन्छन् ।
तपाइँले सरकारले सार्वजनिक कम्पनी निर्माण गरोस् भन्ने खालका कुरा गर्नुहुन्छ , सरकार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको विस्तारका कुरा गर्छ, सरकार र पार्टीका कुरा मिलेका छैनन की के हो ?
यसलाइ त्यसरी नवुझौ भन्ने मेरो आग्रह हो । हाम्रो समाज हिँजोसम्म राजतन्त्रात्मक थियो । अहिले वदलिएर दलाल पुजिवादमा रुपान्तरित भएको छ । दलालपुँजिवादले भुँइमान्छेका लागी काम गर्न सक्दैन ।
अहिले राज्यको उपरी संरचनामा कम्युनिष्ट पार्टिका कार्यकर्ता छन् । यसकारण अहिले राष्ट्रीय पुँजी निर्माणमा यो उपरी संरचनाले काम गर्नु पर्दछ । यसको अर्थ हामीले बैदेशिक लगानी र नीजि क्षेत्रलाइ वाइपास गर्नुपर्छ भनेको होइन । तर, विदेशी लगानीकर्ता र निजि क्षेत्र वढी नाफामुखि हुने भएकोले नाफा नहुने वा कमहुने क्षेत्रमा राज्यको उपस्थीति वढाउन भने जरुरी छ ।
कम्युनिष्ट पार्टिका नेताहरु भ्रष्टाचारमा मुछिने, देशको धन भ्रष्टाचार गरेर विदेशी बैँकमा राख्ने अनी कसरी राष्ट्रीय पुँजिको विकास हुन्छ ?
यो सुनिएको तर प्रमाणित नभएको विषय हो । यदि यस्तो भएको रहेछ भने हामीले त्यो पुँजि स्वदेश ल्याउन पहल गर्नु पर्दछ । अहिले हाम्रो उपरी संरचनामा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व छ । अझ भनौ सरकारमा कम्युनिष्ट पार्टी छ तर सत्तामा दलाल नोकरशाहहरुको बोलवाला छ । यसकारण पनि हामी उत्पादनमुलक बन्न सकिरहेका छैनौ । मलाइ लाग्छ यो दिन त्यति लामो रहदैन । दलाल अर्थतन्त्र उत्पादनमा वदलिन्छ । यसलाइ जनमैत्री वनाउनै पर्छ ।
सत्ता र सरकारका कुरा गर्नु भयो आम मान्छेले बुझ्ने गरी वताइदिनुस न् ?
हाम्रोमा तीन तहका सरकार छन् । तिनै सरकारमा जनताको नेतृत्व छ । तर पनि जनताले चाहे अनुसारका काम भइरहेका छैनन । गर्न खोज्यो अनेक उल्झ्न आइरहन्छन् । यो सवै सत्ता र सरकारको वेमेलका कारण भएको हो । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर सत्ता जड भएर वस्न खोज्छ । सत्तासँग पुरातन सोच रहन्छ ।
हाम्रोमा सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र स्थाइ सत्ता हुन् । सत्ता जनताको पक्षमा काम गर्न नचाहाने तर सरकार समाजवाद निर्माणका लागी कामगर्न खोज्न, अहिलेको द्धन्द यसैको परीणाम हो ।
किन फेसबुक, ट्विटर र यूट्युबले डिलीट गरे ट्रम्पको भिडियो ? यस्तो रहेछ कारण
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र यूट्युबले अमेरिकी राष्ट्रपति…
x२२ साउन, वासिङ्टन (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकी निजी कम्पनीहरुले गत जुलाई…
अष्ट्रेलियामा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या २० हजार नजिक, २ सय ५० भन्दा बढिको मृत्यु
भारतको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा ८ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
बङ्लादेशमा डुङ्गा दुर्घटनामा परी १७ जनाको मृत्यु
गुजरातमा कोभिड अस्पतालमा आगो लाग्दा आठ सङ्क्रमितको मृत्यु